बुद्ध लामा 'नेपाल आइडल' भएपछि पहिलो अन्तर्वार्ता, यसरी आफ्नो परिवारको दुःख सबै बिसाए (भिडियो) - MazzakoNews
Home / INTERVIEWS / बुद्ध लामा ‘नेपाल आइडल’ भएपछि पहिलो अन्तर्वार्ता, यसरी आफ्नो परिवारको दुःख सबै बिसाए (भिडियो)
बुद्ध लामा ‘नेपाल आइडल’ भएपछि पहिलो अन्तर्वार्ता, यसरी आफ्नो परिवारको दुःख सबै बिसाए (भिडियो)
Mazzako News 24th September 2017	INTERVIEWS, PHOTO GALLERY Leaveacomment
रञ्जन अधिकारी, पोखरा / बुद्ध लामाले पहिलो नेपाल आइडल बन्दै इतिहास रचे । नेपाल आइडलमा पहिलो अडिसनदेखि नै निर्णायकहरुको मनमा बसेका बुद्ध टप १८ देखि टप ३ छनौटसम्म एक पटक मात्र डेन्जर जोनमा परे । उनलाई देश विदेशबाट उल्लेख्य भोट आयो । विदेश बस्नेहरुबाट अनलाईन भोटिङमा उनले सबैलाई माथ गरे र ग्राण्ड फिनालेमा कूल प्राप्त भोटमा आधा बढि भोट बुद्धकै नाममा रह्यो र बुद्धले इतिहास रचे ‘पोखराका बुद्ध पहिलो नेपाल आइडल’ । पाँच वर्ष अघि बिग आइकनमा चौथो भएपछि उनी संगीत साधनामा रहिरहे । नवराज बरालपछि तीर्थराज पोखरेलसँग संगीत सिके ।
सन्तबहादुर र सन्तमायाका कान्छो छोरो बुद्ध नाम जस्तै शान्त स्वभावका छन् । उनले कसैलाई पिरेनन् । कोहिसँग रिसाएनन् । यही भन्छन्, उनका बुबाआमा, गुरुजन, साथीभाइ । एउटा दाइ विदेश छन् । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको सरसफाई विभागमा रहेर पोखरालाई २५ वर्षदेखि सफा गर्दै आएका सन्तबहादुरको दुःखको दिन अब सकिए जस्तो भान हुन्छ ।
झण्डै तीन दशक अघि धादिङको लापा ३ कपुरगाउँ (हाल रुबीभ्याली ५) छाडेर आएका उनले दुःख त्याग्न सकेनन् । पोखरामा ओत लगाउने झुप्रो समेत ठड्याउन सकेनन् । उनले थपे – ‘धादिङबाट भोट गर्नेहरुले मन दुखाउनुभाछरे भन्ने सुनेँ । धादिङकै नागरिकता छ बुद्धको पनि । आफ्नो ठाउँ कहाँ बिर्सनु ? धादिङ समाजले पनि सहयोग गरेको छ ।’
आमा सन्तमायालाई छोराछोरी दुःख पाउँछन् कि भनेर सधैं पिर लाग्थ्यो । अब बुद्धको पिर टरेको छ । ‘अब पढाउन नसकेपनि भोकले मर्दैन । पाँच महिना अघि पोखराबाट गयो । कहाँ सुत्यो होला? भोकभोकै छ कि ? अझै पनि लाग्छ । आफू नखाएर हुर्काको छोरो हो । ’ आमाको ममता पोखिन् । सन्तमाया अरुका घरमा कपडा धुने, भाँडा माझ्ने गरेर घरको गर्जो टार्थिन् । (विस्तृतमा न्युज पोखराको आदर्श समाज राष्ट्रिय दैनिकबाट प्रकाशन र बिग एफएम पोखराबाट अडियो रिपोर्ट प्रसारण हुनेछ ।)
यता बाबुआमाले यसो भनिरहँदा कतारमै ‘सेल्फी टिभी’ युट्युब च्यानलमा बुद्धले यसरी परिवारको ब्यथा बिसाएका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो ।
Previous एक ट्वीटले नै खोसियो ‘मिस टर्की’को ताज
Next पोखराबाट यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ ? भाडा बढि लेला, एक पैसो बढि नदिनुस् (हेर्नुहोस् भाडादर)
‘ह्याप्पी न्यू इयर’ हेर्दै, मनाउँदै, पुस १४ देखि हल हलमा
एल्वीन र रेनुकाको ‘तिम्रो मिठो बोलीमा’ (भिडियो)
केकी अधिकारीले लालबाबु पण्डितलाई यसरी नचाए (भिडियो)